Ndụmọdụ maka ileta Ghibli Museum na Japan | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Tokio
Ọ bụrụ na-amasị gị Japanese animation mgbe ahụ ị ga-izute Miyazaki Hayao, ihe dika Japanese Walt Disney. Agadi nwoke a na - eme ihe nkiri na ihe onyonyo site na 60s na ọrụ ya niile na - enwu maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ.
Ọ bụ onye okike nke Princess Mononoke, Onye Agbata Obi M Totoro, Ifufe na-ebili, Howlkè Howl si Castle ma ọ bụ Mmụọ Mmụọ ma o nwekwara ọrụ ndị mere ochie nke dị ebube na ọtụtụ ndị ọzọ na-amachaghị nke ọma na West. A njem na Japan maka a manga / Anime ofufe bụ ihe niile zuru ezu na-enweghị a gaa na Ghibli Museum ya mere rịba ama na ndụmọdụ ndị a n'ihi na enwere nkọwa iji banye na akaụntụ.
1 Zụrụ tiketi Ghibli Museum
2 Otu esi aga Ghibli Museum
3 Glọ Ghibli ahụ
Zụrụ tiketi Ghibli Museum
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị bụrụ ihe nke abụọ ịzụrụ mgbe tiketi ụgbọ elu gị gasịrị. Ihe bụ odighi mfe inweta tiketi Ọfọn, enwere oke ebe na awa. A na-azụta ha n'ịntanetị ị ga-etinye data gị ma họrọ ụbọchị na oge ị ga-eji gaa nleta. Nsogbu bụ mgbe ị bi na South America n'ihi na enweghị kaadị kredit ị nwere ike iji ma ọ na-akụda mmụọ ịnwale ọzọ. Enwere m ndị enyi ọ na-ewute nke ukwuu.
Azịza ya bụ inwe onye na mba ọzọ nke nwere ike ị nweta tiketi ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ Japanese, ka mma. Ndị enyi m mere nke a, na mgbe ahụ, na kwụ n'ahịrị n'ọnụ ụzọ, ha gbagara ịgwa ndị ọrụ okwu ka ha dozie ọnọdụ ahụ ebe ọ bụ na aha enyi ha bụ tiketi. Na Japanese! Luckily enweghị nsogbu.
Kedu nhọrọ ọzọ ma ọ bụrụ na ịnweghị enyi Japan? Ọfọn otu ugboro na Japan ị ga-aga otu n'ime ụlọ ahịa nchekwa ụlọ Lawson (Ha na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ na ite mmiri ara ehi dị ka ihe ịrịba ama), n'ime ị ga-ahụ a akpaka ere igwe.
Ọ kachasị mma ịrịọ maka enyemaka n'ihi na ị nwere ike inwe mgbagwoju anya site na iji ya, n'agbanyeghị na ọ bụghị ihe mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na enweghị tiketi maka ụbọchị ịchọrọ, ị ga na-ele kalenda gị anya ruo mgbe ị ga-ahụ ụbọchị ọzọ na-agaghị eleta ndị ọbịa. Mana ka m gwa gị, nke ahụ nwekwara ike iwe iwe n'ihi na Miyazaki maara nke ọma na ndị ọbịa na-enwekarị. Ruo oge ụfọdụ, Japan na-enweta ọtụtụ njem nlegharị anya Asia, ọkachasị ndị China, yabụ ha na-eri ihe niile.
Ọ bụ ịzụta tiketi ozugbo na Japan nwere ihe ize ndụ nke ịgbapụ na ha. Ọ mere m na 2016 ma ọ dị mwute. Bebịaru nso na n'otu oge ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ịnweghị nhọrọ ọzọ ma ịchọrọ ịga ụlọ ihe ngosi nka, gaa Lawson ozugbo ị nwere ike. Ọsọ ọsọ ka mma. Ego ole bụ tiketi iji gaa Ghibli Museum? 1000 yen ọ dịghị ihe ọzọ, banyere $ 10.
Otu esi aga Ghibli Museum
Lọ ihe ngosi nka adịghị anya site na etiti Tokyo na ị na-abata mfe ụgbọ okporo ígwè na mpaghara. Y’oburu n’inwe njem nke Japan Rail Pass, njem a kpuchitere, mana o dighikwa onu. Na-abịaru Shinjuku ọdụ, otu n'ime ndị kasị n'ọnụ ọgụgụ na Tokyo, ma chọọ nyiwe nke Chuo Line na-aga Mitaka. Havekwesịrị ịkpachara anya na ụgbọ oloko ndị Japan n'ihi na ha na-abịa n'oge ma na-ekesa ọtụtụ ka ọ bụrụ ihe amamihe ịjụ mmadụ banyere ikpo okwu: Mitaka iku? Ma ọ bụ payaa ntị n'eziokwu ahụ bụ na ụgbọ oloko ahụ, na ụgbọ ala dị n'ihu, na-ekwu ya na akara ngosi.
Site na Shinjuku ọ bụ ụgbọala 15 gaa 20 nkeji. Na-enweghị Japan Rail Pass ị ga-akwụ ụgwọ 320 yen gburugburu. Na ọdụ Mitaka ihe niile ị ga - eme bụ ịgbaso ihe ịrịba ama ... na ndị mmadụ! Ọ bụrụ na ihu igwe dị mma, ije dị mma karịa bọs, mana ebe bọs ahụ dị mma, ịnwere ike ịga bọs ma laghachi ọdụ ụgbọ. Bọs ahụ pere mpe, odo, ma jiri mkpụrụedemede Miyazaki chọọ ya mma. Ọ bụ ya mere na ọ dịghị onye na-atụ uche ya!
Gbọ ala ahụ na ndị họọrọ ịga ụlọ ihe ngosi nka na-agbaso otu ụzọ. Ha na-ahapụ ọdụ ụgbọ ahụ ma yipu ọwa mmiri dị n'osisi dị jụụ. Mgbe ahụ, ha tụgharịrị n'okporo ụzọ nke metụtara ogige mbụ, ogige Inokashira. N'ime ogige ahụ, nke dị mita ole na ole site n'okporo ámá, bụ ụlọ ngosi ihe nka. Na-abịa mgbe ihe dị ka 20 ma ọ bụ obere nkeji nke ije.
Glọ Ghibli ahụ
Ọ bụ ụdị ihe eji ewu ụlọ nke anyị na-ahụ na fim Miyazaki. Site n'èzí ọ dị ka ụlọ na Ndagwurugwu Ifufe, site na fim Nauusica. Ìhè agba, ọdịdị gbara gburugburu, ụlọ elu nke a na-ahụ robot nke ndị na-apụta na Laputa, Castle in the Sky, nke yiri ka ọ na-ele anyị anya.
Ọ bụrụ na ọ bụ oge dị elu, ọkọchị, oge opupu ihe ubi ma ọ bụ Afọ Ọhụrụ ndị China, enwere ndị mmadụ ya mere enwere ogologo akara. Luckily Japanese arụmọrụ na-eme ka ọ na-asọ dị nnọọ ngwa ngwa. Enwere ndị ọrụ na-enyocha ọnụ ụzọ ahụ ma ị gafere n'ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ osisi nke nwere windo iko mara mma nke ejiri mara mma mara mma. Ọ bụrụ n'èzí ọ bụ naanị ụlọ ọzọ site na fim Hayao Miyazaki, n'ime anyị nwere ike ikwu otu ihe ahụ, mana ụdị ahụ na-agbanwe kpamkpam.
N'ime ụlọ ngosi ihe nka bụ narị afọ nke iri na itoolu nke ụlọ ndị Bekee otu n'ime ndị na-adọta nke ọma n'ọtụtụ n'ime fim ya. Kiki's, Molọ Na-agagharị, Porco Rosso. Kam gwa gi, I noghi na Disney ebe a. E nweghị plastic, ọ dịghị ihe tacky ma mma ma nwekwuo mma: ala osisi dị na ime ụlọ sara mbara, steepụ nwere aka aka mara mma na nke ọma, ihe igwe mbadamba ihe ochie na bọtịnụ resin, steepụ gbagọrọ agbagọ nke jikọtara ala abụọ na ụmụaka hụrụ ya n'anya ...
A ga-enye gị tiketi ahụ mpempe akwụkwọ n'asụsụ dị iche iche, gụnyere Bekee, nke nwere eserese ụlọ na gburugburu ya. A gwara gị ka ị gaa njem wee nwee ike ịnọ n'ime ogologo oge ịchọrọ. Kedu oghere ndị mejupụtara ụzọ a? Enwere Na-adịgide Adịgide Ngosi Halllọ Nzukọ «Ebee nkiri a mụrụ», ebe ị na-ahụ okpokolo agba na-arụ ọrụ na dịka ọmụmaatụ, nnukwu wheel nke nwere ọkwa dị iche iche na ụmụ amaala Totoro, Satsuki na Mei, ọtụtụ n'ime ha n'ọkwá dị iche iche na mgbe ọ malitere ịtụgharị na -emepụta ọhụụ dị egwu na-aga n'ihu.
Ọzọkwa enwere ụlọ ihe nkiri-sinima. Site n'ọnụ ụzọ ha na-enye gị tiketi pụrụ iche ma ị nwere ike ịga nyocha nke obere ihe nkiri emere maka ụlọ ngosi ihe nka. Gaghị ahụ ya ebe a. Lọ ihe nkiri ahụ mara mma, na osisi, na mkpụmkpụ na-adị naanị nkeji ole na ole. Enwere ndị ọzọ klas nke weghachitere ihe ọmụmụ Miyazaki ya na akwukwo, ihe osise, brushes, uwe, candies ya kacha amasị, akwukwo ndi n'enye ya obi maka ihe osise ya ...
N'ezie enwekwara ụlọ ahịa, ụlọ ahịa Mamma Aiuto!, nwere ọtụtụ ngwa ahia ịzụta. Ọ bụ ezie na e nwere ụlọ ahịa Ghibli na Japan niile, ebe a ị ga-ahụ ụfọdụ ihe pụrụ iche: ihe na-egbu maramara nke Laputa Castle dị na mbara igwe, dịka ọmụmaatụ, Totoro thermos, slippers, sweatshirts ... Ọ bara uru ileta ọbụlagodi mgbe enwere ọtụtụ mmadụ. ịzụ ahịa.
N'elu ụlọ elu, enwere ebe pụrụ iche maka ụmụaka nke ndị okenye na-enwere anyaụfụ: enwere a nekkobasu ma ọ bụ catbus nnukwu, jupụtara, maka ụmụaka igwu egwu. Ebube! Enwekwara obere teres na site ebe ahụ otu ọkwa ígwè na-arịgo n'ụlọ elu ebe robot na-anabata ndị ọbịa. Ọ dị ebube.
Echefuru m ikwu ya Anabataghị foto n'ime ebe ngosi ihe nka ma ọ bụ vidiyo na ha siri ike banyere nke ahụ, ọ bụ ezie na ahụrụ m ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi na ekwentị ha. Naanị ebe ị nwere ike ịse foto bụ n'èzí Ya mere, ebe a na robot bụ ebe onye ọ bụla na-amalite agbapụ.
Na iji mechie nleta gị, ndụmọdụ m bụ izu ike na cafeteria. N'adịghị ka ihe anyị nwere ike iche, na ebe a maka kọfị ha wepụrụ isi gị, ọ dabara nke ọma na ọ dịka Japan niile. A na-akwanyere ọnụahịa ahụ ùgwù, ọ dịghị mgbe ha gabigara ókè, n'agbanyeghị ụdị nke ebe ịnọ. Na tupu ịlaghachi n’ọdụ ụgbọ ahụ, gaa njem na ime ụlọ ịwụ ahụ. Ebube! Ha buru ibu, ha nwere mgbidi, tinyekwa ibo ụzọ osisi, na ọwa mmiri ochie. Nke mara mma!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Ndụmọdụ maka ileta Ghibli Museum na Japan